बेलायती निर्वाचनमा ४ जना नेपाली विजयी – Nepal Trending
On २१ बैशाख २०७६, शनिबार १३:४४
लन्डन । बेलायती निर्वाचनमा ४ जना नेपाली विजयी भएका छन् । बिहीबार बेलायतमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली मूलका चार उम्मेदवार विजयी भएका छन । स्थानीय अल्डरसट टाउन काउन्सिलमा नेपाली मुलका प्रवेश केसी, मेडस्टोन काउन्सिलमा दिनेश खड्का, हेमल हेम्पस्टिडमा गोवद्र्धन (सागर) सिलवाल र कोलबर्न टाउनमा डा. जगन्नाथ शर्मा काउन्सिलर निर्वाचित भएका हुन् ।
बेलायतका विभिन्न क्षेत्रबाट काउन्सिलरको दौडमा रहेका नेपाली समुदायका अन्य उम्मेदवार भने पराजित भएका छन । बेलायतमा धेरै नेपाली बस्दै आएको अल्डरसटमा पहिलो पटक नेपाली समुदायबाट केसी निर्वाचित भएका हुन् । उनि कन्जरभेटिभ पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका थिए ।
केसीले ३ सय २८ मत प्राप्त गर्दै विजयी हुँदा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी लेबर पार्टीका उम्मेदवारले २ सय ८६ मत प्राप्त गरेका छन । यसअघि लेबरले जित्दै आएको सो क्षेत्रको नतिजा केसीले उल्ट्याएका हुन् । यस्तै लिबेरल डेमोक्र्याट पार्टीका उम्मेदवार खड्काले ८ सय ५२ मत प्राप्त गरी बिजयी भएका छन् । खड्का निर्वाचित क्षेत्र विगत लामो समयदेखि उनकै दल लिबेरल डेमोक्र्याटको पकड क्षेत्र हो ।
यस्तै सिलवाल दोस्रो कार्यकालका लागि काउन्सिलरमा निर्वाचित भएका हुन् । सिलवाल ७ सय २४ मत प्राप्त गरी बिजयी भएका छन् । यस्तै डा. जगन्नाथ शर्मा तेस्रो कार्यकालका लागि काउन्सिल निर्वाचित भएका छन् । कन्जरभेटिभ पार्टीको तर्फबाट चुनाव लडेका शर्मा सो क्षेत्रमा निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् ।
इङ्ल्यान्डका २ सय ४८ काउन्सिल, ६ मेयर र नर्दन आयरल्यान्डका ११ काउन्सिलसहितका स्थानीय तहमा ८ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधिका लागि निर्वाचन भएको थियो । सो निर्वाचनमा २ नेपाली मुलका ब्यक्ति पहिलो पटक निर्वाचित भएका हुन् भने २ जना दोस्रो र तेस्रो पटक निर्वाचित भएका हुन् ।
नेपाली विद्यार्थीका लागि अष्ट्रेलिया अध्यागमनको नयाँ नियम